Kungani inethiwekhi ingekho kuwo wonke amaKharikhulamu? | Martech Zone
NgoMsombuluko, Julayi 21, 2008 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
Namuhla ntambama ngimenywe esidlweni sasemini esihle kakhulu futhi saxoxa I-Indiana Business College I-Harrison College. I-Indiana yaziwa kakhulu ngokuba nezinye zezikole ezinhle kakhulu ezweni, nasemhlabeni, kepha abantu baseHarrison bayaqaphela ukuthi sisezweni eliguquka ngokushesha. Benza iphusha elinolaka ukuqinisekisa ukuthi bazohlala phambili kwejika.
Ngesikhathi sikhuluma, ngabona ukuthi kunethuluzi elilodwa elikhanyayo elilahlekile kwikharikhulamu yabafundi kulezi zinsuku. Kalula nje, indlela yokwenza lokho Inethiwekhi (ngobuchwepheshe nangaphandle kobuchwepheshe). Iningi labafundi kudingeka ukuthi bathathe amakilasi afana nokukhuluma esidlangalaleni ngesikhathi abaphothula ngaso, kepha kuyaqabukela ukuthi bafundiswe ngokubaluleka namandla wokuxhumana.
Nginabangane bami abasondelene nabazwakalisa ukuzisola ngokuthi abayanga emicimbini yesifunda futhi bahlala bexhumene nabaholi bangaphambilini abasebenza nabo. Eminyakeni edlule, bathole ukuthi banyamalala endaweni ebonakalayo manje badinga 'ukubamba' ukuze bathole ukudonsa ukuze bathole umsebenzi noma ithuba abalifunayo. Ngeke nje usithole leso sikhathi!
Isikhathi sami esiningi engisichitha ngaphandle komsebenzi wami oyinhloko ngichitha ukuxhumana nabantu. Ukuxhumana nakanjani kungu- # 2 ohlwini lwami lokuthi ngisisebenzisa kanjani isikhathi sami (# 1 sisebenza kahle emsebenzini wami wamanje!). Vala ku- # 3 uthola isikhathi nethuba lokusebenza ngamabhizinisi amasha noma imisebenzi eseceleni. Kulungile - empeleni ngibeka ukuxhumana njengendawo ebaluleke kakhulu kunokwenza imali yesibili!
Isizathu silula - ukuxhumana ngenethiwekhi kuholele ekutheni ngithole umsebenzi wami oyinhloko futhi ngiholele kuwo wonke amathuba wesibili. Ngaphandle kwenethiwekhi, bengingeke ngibe lapho ngikhona - futhi bengingeke ngithole amathuba angivulekele okuya lapho ngizobe ngilandela khona.
Izingosi kuyinto Investment
Izingosi ukutshalwa kwezimali. Phezulu, kungabonakala sengathi uchitha isikhathi namandla unikeza ukubonisana, izinsizakalo noma ukwandisa inethiwekhi yakho ngaphandle kwezindleko. Kodwa-ke, ngalobu budlelwano uthola ukwethenjwa ngabantu nokwakha igunya ngesihloko osidingida.
Ngokusobala, ngithathe usuku lokungasebenzi namhlanje. Ngichithe usuku lonke ngikhuluma namasu okuxhumana nabantu I-Harrison College, kuyaboniswana BioCrossroads ekwakheni ubukhona babo online, nokuhambela i Indiana Usomabhizinisi Umhlangano weKomidi Elilawulayo - konke ngobudlelwano bami benethiwekhi!
Uma isikole sifuna ukukhuluma obala njengekhono elidingekayo, othisha kumele banikeze ukuxhumana ukunakwa okufanele. Abafundi kumele bafundiswe ngokuthola amathuba okuxhumana nabantu, indlela yokunakekela nokunakekela ubudlelwane babo benethiwekhi, ukuhlakulela ubukhona be-inthanethi - kanye nokuthi ungazuza kanjani ngakho konke okungenhla. Uma ungeke ukwazi ukugcwalisa isifundo esivunyelwe esihlokweni, ngibheke phambili ekuboneni amanyuvesi namakolishi enza imihlangano yokufundisana ngesihloko.
Uma ungathanda usizo ngalokhu, zizwe ukhululekile uku ngithinte!
Tags: imithombo ye-infographicslaura lippay
Jul 21, 2008 ngo-9: 16 PM
Abafundi be-MySpace ne-Facebook basekolishi ngandlela thile bangena onqenqemeni lokuxhumana nabantu. Badinga nje imininingwane yokuthi bangakusa kanjani ezingeni elilandelayo.
Jul 21, 2008 ngo-9: 46 PM
Ngandlela-thile, yebo. Kodwa-ke, abafundi basekolishi nabo abanalwazi ekusebenziseni kwabo la manethiwekhi. Iphutha elilodwa ekwahluleleni lingonakalisa idumela lomuntu eminyakeni eminingi ezayo!
Asethembe ukuthi siyalubona lolu hlelo lwezifundo luzokwakhiwa eminyakeni embalwa ezayo.
Jul 22, 2008 ku-12: 22 AM
Leyo yinto eyodwa engidinga ukuyenza kakhulu ukuxhumana. Ngihlanganiswe online kepha ngingenza okuningi kokuhlangana futhi ngibingelele nontanga yami emhlabeni wangempela. Kuzofanele ngithole indlela yokuyifaka phakathi kwesikole nomsebenzi .. kumele ngibe nayo ngempela.
Jul 22, 2008 ku-6: 12 AM
Uma isetshenziswe kahle, inethiwekhi inamandla amakhulu. Ngezithangami nakufacebook, ngiqoqe iqembu elincane elisebenza ndawonye ukudala imikhiqizo yebhange lokuchofoza. Kufana nokuhlukaniswa kwabasebenzi, lapho umsebenzi wenziwa kahle. Futhi ngokusebenzisa amaqembu enethiwekhi noma ama-mastermind njengoba abanye bekubiza kanjalo, ulwazi lokufunda lungolwesibili. Ukuhlangana nokuxoxa ngezinkinga / izinkinga nabantu kushaya noma iyiphi i-ebook nganoma yisiphi isikhathi sonyaka. Amasenti ami ama-2.
I-Oct 27, i-2009 ku-1: i-38 PM
yebo uqinisile, ngokubona kwami ​​zimbalwa kakhulu izinto kulo mhlaba ezingashintsha yonke into, eyodwa inethiwekhi enye ukusebenza njengeqembu., Njalo njengomuntu kufanele ukuthi unikeze ulwazi esinakho namandla alo ngenethiwekhi kuphela , uma ur kwinethiwekhi unethuba lokwazi wonke amalungu imizwa nemibono yawo ngakho-ke yonke leyo mibono + eyakho ngakho ulwazi lwe-ur luzokwandiswa futhi kufane nokufana nawo wonke amalungu enethiwekhi athole ithuba lokwandisa ulwazi lwawo becoz ulwazi unamandla ngaphezu kwanoma yini enye,
Ngiyabonga ngokwabelana ngendatshana enhle kangaka enginika ukuthi ngibelane ngombono wami lapha.
Okthoba 28, 2009 ngo-9: 04 AM
Ngicabanga ukuthi ungabuyekeza okuthunyelwe kwakho njengoba i-IBC iguqule igama layo laba yiHarrison College.
Ngizoba nokuningi engingakusho ngalokho engikutshela abafundi bami ngezingosi ezenziwa online
Okthoba 29, 2009 ngo-2: 00 AM
Kubuyekezwe uThomas! Ngicabanga ukuthi wenza umsebenzi omuhle ohola abafundi bakho ngesibonelo ezinkundleni zokuxhumana nasezingosini zokuxhumana nabantu.